Abakamasikandi 'bayolila eNdlunkulu' - Ilanga News
Home Izindaba Abakamasikandi ‘bayolila eNdlunkulu’
Abakamasikandi ‘bayolila eNdlunkulu’
Bathi belilikhulu iqhaza leSilo emculweni wesintu
Ngabaculi bakamasikandi uPhuzekhemisi Mnyandu, uThokozani Langa noMfiliseni Magubane.
BAKHULEKELE usuku lokuyobhonga emswaneni eNdlunkulu kaZulu abaculi bakamasikandi, njengoba isizwe sisemanzini emuva kokukhothama kweSilo uZwelithini kaBhekuzulu mhla ka-12 ku-Ndasa (March), satshalwa mhla ka-17.
Ngokuthola kweLANGA, abaculi bakamasikandi bahlela ukuqhuba izinkomo beyozwakalisa ukulila kwabo ngokusithela kwenkanyezi kaZulu esigodlweni seSilo Kwa-Khethomthandayo, KwaNongoma mhla ka-23 kuMbasa (April).
Umthombo waleli phephandaba uthi kuhlelwa ukuthi uma kubuywa endlunkulu, abaculi balibangise ePhatheni, eRichmond, emzini kaMnu Welcome “Bhodloza” Nzimande (ongasekho) owayengumsakazi wohlelo lodumo uSigiya Ngengoma, wabuye waba ngumphathi wokhozi FM.
“Konke sekumi ngomumo. Kuzona zonke lezi zindawo kuzohanjiswa izilwane, okuyindlela yokuyokhala, kodwa sibone kukuhle ukuthi siqale endlunkulu ngoba phela uBayede ubefana nobaba wethu,” kusho umthombo weLANGA.
Kubikwa ukuthi phakathi kwabaculi abazobe beyingxenye yalolu hambo, yiqembu uShwi noMtekhala, uPhuzekhemisi, uThokozani “Somnandi” Langa, uKhuzani “iNdlamlenze” Mpungose, Izingane Zoma, u-Ali Mgube, uBheki “Hhashi Elimhlophe” Ngcobo noMfliseni “Mqabulashe she” Magubane.
Ngokwemithombo yeLANGA, kuthiwa uSomnandi nguyena othunywe ngabaculi endlunkulu ukuba eyokhulekela lolu suku okuthiwa lwamukeliwe.
Ebuzwa uSomnandi ngalolu daba, uthe ngaphambi kokuba aphawule kuleli phephandaba kusamele axoxe nabanye ozakwabo ukuze bamnikeze igunya lokukhuluma ngalo kwabezindaba.
UMqabulasheshe uthe akungatshazwa uthi iMbube ibambe elikhulu iqhaza emculweni wesintu. Uthe eminyakeni edlule kukekwahlasela ukufa emacikweni kwaze kwangenelela yona iMbube, yakhuza ulaka.
“Ngesikhathi amaciko edlula emhlabeni, iSilo sakhala kakhulu ngokuthi yibutho laso leli elifayo. IMbube bekuyinkosi enesineke, ekwaziyo ukunakekela isizwe sayo.
“Ngakho-ke akuwona umqondo omuhle ukuthi singayi ukuyokhala sibhonge emswanini. ISilo besikhuluma kuzwakale ngisho emacikweni angaboni ngaso linye,” esho
Kuthiwa abasakazi bakamaskandi beziteshi ezahlukene, yizintatheli eziloba ngalo mculo nabahleli bemicimbi bazobe beyingxenye yalolu hambo.
Ebuzwa ngalolu daba uMntwana uThulani okhulumela indlunkulu, uthe kulezi zinsuku akekho Kwa-Nongoma, usebenzela ehhovisi elisoNdini, okwenza engakwazi ukuthola okwenzeka usuku nosuku endlunkulu.
Imizamo yokuthola uMntwana uMbonisi iphunzile njengoba ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa kwaze kwashaya isikhathi sokuloba.
Previous articleIzinhlelo zokunxenxela uPitso kwiBafana
Next articleUdumele ochithwe esethathiwe esikoleni ngenxa yeminyaka